Cloudy Sense: ကြားသိသမျှ Sep 2009
ကြားသိသမျှ Sep 2009
* ၅၀၀၀ ကျပ်တန်ကြောင့် စီးပွားရေးပိုမို ကြပ်တည်းမည်ဟုဆို 28/09/09
“နေပြည်တော် ဆောက်တယ်။ အစိုးရ ၀န်ထမ်းတွေကိုလည်း လစာ အဆပေါင်းများစွာ တိုးပေးတယ်။ စစ်တပ်ရဲ့ အသုံးစရိတ်ကလည်း တနေ့တခြားပိုများလာတယ်။ အရာရှိက စပြီး စစ်သားအဆုံး တပ်မတော် သားတွေကို တိုင်းပြည်က ရှာကျွေးနေရတယ်။ အစိုးရမှာ ခုလို ဘတ်ဂျက် လိုငွေတွေ ပြနေလွန်းလို့ ၅၀၀၀ တန်ထုတ်ရတာ ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်”
“၅၀၀၀ တန်ထုတ်မယ်လို့ ကြေညာပြီး ရွှေဈေး၊ ဒေါ်လာဈေးတွေ တက်သွားတာက လန့်လို့ တက်သွားတာ။ တကယ် ငွေကြေး ဖောင်းပွလို့ မဟုတ်သေးဘူး။ တကယ်က ၅၀၀၀ တန်ထွက်ပြီး ခြောက်လနဲ့ တနှစ်အတွင်းကျမှ ဖြစ်မှာ။ နောက်ဆုံး ဈေးကွက်မှာ အဆပေါင်းများစွာ ဈေးတက်မယ်။ ဒါက သီအိုရီအရ သေချာပေါက် ပြောနိုင်တာပါ”
“ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ ငွေစက္ကူပေါ် တိရစ္ဆာန်ပုံ ရိုက်နှိပ်ပြီး သုံးတာ မတွေ့ဖူးသေးဘူး။ သူတို့နိုင်ငံတွေရဲ့ အကျော်အမော်တွေ၊ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင် ပုံတွေကိုပဲ ငွေစက္ကူပေါ်မှာ အမြတ်တနိုး ရိုက်နှိပ် ကြတာ။ ငွေစက္ကူ မြင်တာနဲ့ သူတို့ တိုင်းပြည်အကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားမိတယ်”
* တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ် အရေး ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာ 28/09/09
“တရုတ်အစိုးရ ညွှန်ကြားချက်အရ မြန်မာပြည် အရှေ့ပိုင်းမှာ နေတဲ့ တရုတ်လူမျိုးတွေ ပြန်လာဖို့ စက်တင်ဘာ ၂၅ရက်က တရုတ် စံတော်ချိန် ည ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ်မှာကြေညာတယ်၊
မြန်မာပြည်မှာ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာ နိုင်တဲ့အတွက် တရုတ် နိုင်ငံသားတွေ ချက်ခြင်းပြန်လာ ကြဖို့ပါ။
၀တွေက စစ် အစိုးရ တပ်တွေနဲ့ ကန့်သတ် စည်းမျဉ်းခြား ထားတယ်၊ နအဖက စစ်အင်အား များများစားစားနဲ့တော့ လုပ်မှာ မဟုတ်ဘူး၊
လက်နက်ကြီးတွေ၊ မြောက်ကိုရီးယားက ၀ယ်ထားတဲ့ လက်နက်တွေနဲ့ ပြင်ထားတယ်လို့ ပြောတယ်
* WHO RULE THE COUNTRY 28/09/09
top Generals know exactly of who rule the country. It is not Senior General Than Shwe but his youngest son Maung Maung alias Thant Zaw Shwe who giving all order of what to do and don’t to Than Shwe
go more detail
* ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန် ဝန်ကြီးချုပ် တဦး အင်္ဂါနှင့် အညီ ပို့ဆောင် နုတ်ဆက် မခံရ 28/09/09
ထီးမိုး မခံရတဲ့ အပြင် ဘေးကိုပါ ရောက်နေတော့ ဓါတ်ပုံကို ကြည့်ပီး လူတွေက ဝန်ကြီးချုပ် သိန်းစိန်ရဲ့ အနေအထားကို သဘောပေါက်သွားကြတာ
* ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အနောက်နိုင်ငံ သံအမတ်များနှင့် တွေ့ခွင့်တောင်း 28/09/09
“မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အရေးယူပိတ်ဆို့ထားမှုများ အားလုံးကို သိရှိနားလည် စေရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၏ သံမှူးကြီး၊
ဥရောပ သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများ၏ ကိုယ်စားလှယ်သံ အမတ်ကြီး၊
သြစတေးလျနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး တို့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ခွင့်ပြုပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်”
* သျှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း စွမ်းအားရှင်အား စစ်ရေးလေ့ကျင့်ပေးနေ 28/09/09
“ မိုင်းယန်းမှာ စွမ်းအားရှင် တွေကို စစ်ရေးလေ့ကျင့် ပေးနေတာ အခုတစ်ခေါက်ဆို ၂ ကြိမ်မြောက်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ ရက်လောက်က လေ့ကျင့်ပေးတာ စွမ်းအားရှင် အင်အား ၅၀ ကျော်ရှိတယ်။ အခုတခေါက် ၄၀ ကျော်ရှိတယ်၊ ၂ သုတ်ပေါင်း ၉၀ ကျော်ရှိပြီ။
သူတို့ခေါင်းဆောင်က ရဲထွက်၊ ဒုရဲအုပ်စံသိန်းတဲ့ အသက် ၅၀ ကျော်ပြီ။ မိုင်းယန်း ဈေးတန်း ရပ်ကွက်မှာ နေတယ် ”
* ငွေစက္ကူဈေး ကြေညာချက်ကြောင် ကုန်ဈေးနှုန်းတက် 25/09/09
ကြေညာချက် ထွက်ပြီး နာရီပိုင်းအတွင်း ရွှေတကျပ်သားဈေး နှစ်သောင်းကျော် ခုန်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။
ငါးထောင်တန်ထွက်ရင်တော့ ကျိန်းသေဈေတက်မယ်ပေါ့နော်။ ငွေဖောင်းပွမှုဖြစ်မယ်၊ ဈေးတက်မယ်ဆိုပြီးတော့အပြည့်အစုံသို့
* မြန်မာ့အရေး ကျွမ်းကျင်သူများ ပါဝင်မည့် ဝက်ဘ်၏ ကြားနာမှု 25/09/09
အမေရိကန်သည် မြန်မာအစိုးရနှင့် ပိတ်ဆို့မှုရော၊ ဆက်ဆံမှုပါ ပါရှိသော မူဝါဒအသစ်နှင့် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု အပြည့်အစုံသို့
* ဂန္ဓာလရာဇ် မင်းတြားကို နေပြည်တော်တိုင်းက မချေမငံပြုမူ နေသလော သောကြာနေ့၊ 25 စက်တင်ဘာလ 2009 သျှမ်းသံတော်ဆင့် 25/09/09
မိမိအာဏာလိုအပ်ချက်များ အတွက် မီးစင်ကြည့်၍ အကွက်ပြောင်းကနေသည့် ဗမာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တို့အဖို့
အသက် ရူချောင်ခွင့်ရှိမရှိ ဆိုသည်မှာလည်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဖြစ်လေသည်။ အပြည့်အစုံသို့
* ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှု ရုပ်သိမ်းရေး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စစ်အစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လို 25/09/09
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ သဘောထား ကတော့ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကတည်းက သူက အစိုးရနဲ့၊
နအဖနဲ့ ဒီ Sanction တွေ Lift လုပ်ဖို့ (ရုပ်သိမ်းဖို့) ကို ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် လိုတယ်လို့ အဆိုပြုခဲ့ဘူးတယ်။
အခု အဲဒီဟာအပေါ်မှာ အဆိုပြုချက်တွေကို တကယ် အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ဖို့ဆိုရင် လိုအပ်ချက်၊
လိုအပ်ချက်ဆိုတာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူကိုယ်တိုင် သိရှိဖို့ လိုအပ်တဲ့ အချက်တွေ ရှိတယ်၊
နောက်တခုက သက်ဆိုင်ရာ Impose (ပိတ်ဆို့) တဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ သဘောထား တွေလည်း သိဖို့လိုတယ်။ ...." အပြည့်အစုံသို့
*မြန်မာ့အရေး ကျွမ်းကျင်သူများ ပါဝင်မည့် ဝက်ဘ်၏ ကြားနာမှု 25/09/09
G-20 ထိပ်သီးညီလာခံမှာ ရွှေဝါရောင် နှစ်ပတ်လည် ဆန္ဒပြ 25/09/09
*အစိုးရနှင့် အတိုက်အခံ နှစ်ဖက်စလုံးကို တိုက်ရိုက် ဆွေးနွေးသင့်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား 25/09/09
* ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု ရုပ်သိမ်းရေး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စစ်အစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လို 25/09/09
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ သဘောထားကတော့ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကတည်းက သူက အစိုးရနဲ့၊
* နအဖအစိုးရအပေါ် အမေရိကန် အစိုးရက မူဝါဒသစ် ထားရှိ 24/09/09
* ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇန ကံဆောင်ရန် ဆရာတော်ကြီးများတွင် တာဝန်ရှိဟု သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု အဖွဲ့ကြီးက လျှောက်ထား24/09/09 အပြည့်အစုံသို့
* တပ်မဟာ(၅)တွင် ထိုးစစ် စတင်နေပြီ24/09/09
“သူတို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုမှာ နယ်ခံလူထုတွေတော့ တော်တော်ခံရတယ်။ ဒီလ (၁၈)ရက်နေ့က မယ်ကူးထာ့ ကျေးရွာသား ကျော်ဖားတို့ ကို ပစ်သတ်ခဲ့ တယ်။
အဲဒီလူငယ်က စကား မပြောတတ်၊ နားမကြားတဲ့ သူဆိုတော့ သူတို့ခေါ်တာ မကြားလို့ဆိုပြီး ပစ်သတ်လိုက်တာ။
အခု သူတို့(နအဖ၊ ဒီကေ ဘီအေ) လှုပ်ရှားမှုက ရွာတွေရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ခြံထဲ၊ လူတွေ သွားလာနေတဲ့ လမ်းနဲ့ ချောင်းကမ်းပါးတွေမှာ မိုင်းတွေ ထောင်ထားကြတယ်။
ရွာသား တွေကို မထိပေမယ့် ရွာသားတွေရဲ့ ကျွဲတွေ၊ ဝက်တွေ ထိတာများတယ်” အပြည့်အစုံသို့
* အယောင်ပြ အချိန်ဆွဲ နိုင်ငံရေးကစားကွက်အဖြစ် အသုံးချခြင်းဖြင့် နိုင်ငံရေး ပြဿနာများမှာ ပြေလည်သွားမည် မဟုတ်ကြောင်း သဘောထား ထုတ်ပြန်24/09/09
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွှတ်ရေးကို စေတနာမပါဘဲ အယောင်ပြ အချိန်ဆွဲ နိုင်ငံရေး ကစားကွက်အဖြစ်
အသုံးချခြင်းဖြင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးပြ ဿနာများမှာ ပြေလည်သွားမည် မဟုတ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု အဖွဲ့ကြီး၊
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများအဖွဲ့၊ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ်တို့က ပူးတွဲ သဘောထား ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
* သူများနောက်လိုက် လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီလို့ မြန်မာ့ အရေးဆောင်ရွက်သူများ စွပ်စွဲ 24/09/09
* အမေရိကန်က မြန်မာမူဝါဒ အကြောင်းပြော 24/09/09
* မြန်မာ့အရေး နိုင်ငံတကာ ကပိုမို တွန်းအားပေးဖို့ ဘန်ကီမွန်းတိုက်တွန်း 24/09/09
“ပထမ အနေနဲ့ကတော့ အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာစေရေး သေချာစေဖို့၊ မြန်မာ့မိတ်ဆွေများ နိုင်ငံတွေက သဘောတူ အတည်ပြုထားတဲ့ အတိုင်း လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာ အများကလက်ခံနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေ ဖန်းတီးနိုင်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကုလသမဂ္ဂနဲ့အတူတကွ လျှောက်လှမ်းဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။”အပြည့်အစုံသို
* မြန်မာနိုင်ငံကို ပိတ်ဆို့မှု မရုပ်သိမ်းပေမဲ့ စစ်အစိုးရနဲ့ တိုက်ရိုက် ဆက်ဆံမည် 24/09/09
* အာဏာ အလွဲသုံးစားလုပ်မှု ၊ အကျင့်ပျက်လာဘ်စားမှု နှင့် အမိန့် မနာခံမှုများရှိနေသော မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ ကို ဖျက်သိမ်းတော့မည် ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်23/09/09
-ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးထဲမှာ … 23/09/09
"ဗိုလ်ချုပ်ပေးသည့် စစ်ပညာ ပြည်သူတွေကို သတ်ဖို့မဟုတ်ဘူး” ဆိုသည့် အော်သံ များ ကတော့ တိုးလျစွာ ပျောက်ကွယ်လျက်ရှိပေပြီ။"
- အင်အားကောင်း အတိုက်အခံဖြစ်ရေး ဦးရွှေအုန်း ဖိတ်ခေါ် 23/09/09
-မြန်မာ-အမေရိကန် ဆက်ဆံရေးပြန်ကောင်း လာမည်လော 23/09/09
စစ်အစိုးရ ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန် နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းတို့ နယူးယောက်မြို့သို့
၁၄ နှစ်အတွင်း ပထမဆုံး အကြိမ် ကုလသမဂ္ဂညီလာခံ တက်ရောက်ခြင်း ပေါ်လစီ သုံးသပ်ချက် ထွက်မယ်ပြောတယ်၊ စစ်အစိုးရက တရုတ်၊ ရုရှား ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ အမေရိကန်နဲ့ ဆက်ဆံရေး အရမ်းကောင်း ချင်နေတယ်၊
- ရေနံချောင်းတွင် ငလျင်လှုပ်၊ နေပြည်တော် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင် မြေပြို 23/09/09
- အတွေးအခေါ် ပြောင်းလဲရေး (ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်)
"စစ်မှန်တဲ့ တော်လှန်ရေးဟာ အတွေးအခေါ် ပြောင်းလဲရေး ဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြတယ်။
အာဏာကို အထင်ကြီးလွန်းတာကြောင့် အာဏာရှိသူရှေ့ရောက်ရင် ဗမာတွေဟာ ကြောက်လန့်ပြီး ခခယယ လုပ်တော့တာပဲလို့ အင်္ဂလိပ် ကိုလိုအနီ အရာရှိတဦးက မှတ်ချက်ချဖူးတယ်။
အာဏာရှိသူကို ကြောက်ပြီး အာဏာမရှိသူကို အထင်သေးတာဟာ ဗမာ့အကျင့်ဓလေ့လိုဖြစ်နေတယ်။"
-သတင်းထဲက ဂဏန်းများ၊ တရုတ်သို့ ရေနံ နှင့် ဓာတ်ငွေ့ စတင် သွားမည့် အချိန်23/9/09
ထိုစီမံကိန်းကြောင့် မြန်မာအစိုးရက နှစ်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ဒေါ်လာ ၂၉ ဘီလီယံ ရရှိမည်ဟု ဆို
အပြည့် အစုံသို့ 
(၁) ဘာသာရေး ဒုက္ခသည်
(၂) လူမျိုးရေး ဒုက္ခသည်
(၃) နိုင်ငံရေး ဒုက္ခသည် … ဆိုပြီး ယေဘုယျ သတ်မှတ်ထားတယ်တဲ့။
ဦးဇင်းအမြင်ကတော့ ၅၆ သန်းသော မြန်မာပြည်သူ တွေဟာ ဒုက္ခသည်တွေပဲလို့ ဦးဇင်း မြင်မိပါတယ်။
-အ၀ီစိပန်းတိုင်သို့ အရောက်လှမ်းနေတဲ့ အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရ 22/9/09
ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးကို ရဟန်းသံဃာ တွေဦးဆောင်ပြီး ဆင်နွှဲကတည်း ကနေခုချိန်ကာလထိ မြန်မာစစ်အစိုးရဟာ ရဟန်းသံ ဃာတွေအပေါ်မှာ နှိပ်စက်၊
ဖမ်းဆီး ခြိမ်းခြောက်တာ ထောင်သွင်း အကျဉ်းချ တာတွေကို ဆက်လက် ကျူးလွန်တုန်းပဲ ဆိုတာကို လူ့အ ခွင့်ရေးအဖွဲ့မှ အင်္ဂါနေ့က ထုတ်ဖော် ပြောကြားလိုက်တယ်။
- စစ်အစိုးရနှင့် SSA-S အပစ်ရပ်မလား 22/9/09
“ကျနော်တို့ဘက်ကတော့ ဆွေးနွေးရေးအတွက် အမြဲတမ်း တံခါးဖွင့်ထားတယ်၊ နိုင်ငံရေးကို ဖြေရှင်းဖို့ အမြဲတမ်း ကြိုဆိုပါတယ်”ဟု SSA -S မှ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် စိုင်းဆိုင်မိဏ်းက ဆိုသည်။အပြည့် အစုံသို့ 
- ကတ္တီပါ လက်အိတ် ကျွတ်ကျ သွားပြီးတဲ့နောက် (ဘွဲ့ဖြူ)21/9/09
၁၉၆၂ ခုနှစ်မှာ နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံပေါ် အပီအပြင် တက်လာခဲ့ချိန်ကစလို့ နောက်ထပ် (၂၆) နှစ်တိုင် ဘယ်လို လောက်လောက် လားလား စိန်ခေါ်မှုမျိုးကိုမှ ရင်မဆိုင်ရဘဲ ပန်းပန်နိုင်ခဲ့တယ်။
အခုတော့ အခြေအနေက ပြောင်းသွားပြီ။ စစ်အုပ်စုဟာ ကိုးကန့်အဖွဲ့နဲ့တင် ရပ်မှာမဟုတ်ဘူး။
သူ့ရဲ့သေနင်္ဂဗျူဟာ အတိုင်း ကျန်အဖွဲ့တွေကိုလည်း တခုပြီးတခု ဖြိုခွဲသွားမှာဖြစ်တယ်။
အဲဒီတော့ အပစ်ရပ်အဖွဲ့ရော အပစ်မရပ်အဖွဲ့ရော လုပ်စရာကလည်း တခုပဲရှိတော့တယ်။ အဲဒါကတော့ ကိုယ့်အလှည့် ရောက်လာမှာကို ထိုင်စောင့်မနေဘဲ ဘဝတူအချင်းချင်း ကျောချင်းကပ်၊ ရင်ချင်းအပ်၊ လက်ချင်းတွဲပြီး ဘုံရန်သူ မြန်မာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို မြန်မာ့မြေပေါ်က အပြီးတိုင် တွန်းလှန်ဖယ်ရှား မောင်းထုတ်လိုက်ကြဖို့ဖြစ်တယ်။အပြည့် အစုံသို့ 
-မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို စပိန်နိုင်ငံမှာ တရားစွဲ23/9/09
ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေ အပါအဝင် မြန်မာစစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင်တွေကို လူသားမဆန်တဲ့ ရာဇဝတ်မှု များ ကျုးလွန်မှု Crime Against Humanity နဲ့ 
စပိန်ိုိံင်ငံ တရားရုံးချုပ်မှာ လူံ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ တခုက အမှုဖွင့် တရားစွဲဆိုလိုက်ပါတယ်။
-ညူကလီးယား နည်းပညာ ဘယ်နိုင်ငံက ရသလဲ 23/9/09
ဒီနည်းပညာကို မြန်မာအစိုးရက ရုရုရှားနိုင်ငံနဲ့မြောက်ကိုရီးယား ဘယ်နိုင်ငံကနေ ရယူနေသလဲ ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး စစ်အရာရှိဟောင်း တဦးက အမြင်နဲ့အတူ ဒေါ်နန်းခမ်းထွေးက တင်ပြထား
- လျှို့ဝှက် မြေအောက် လိုဏ်ခေါင်း စီမံကိန်း 23/9/09
မကွေးတိုင်း နတ်မောက်မြို့ နယ်အတွင်း ဖောက်လုပ်နေတဲ့ လျှို့ ဝှက် မြေအောက် လိုဏ်ခေါင်း စီမံကိန်းသတင်း
- တရုပ်ပြည်နှစ် ၆၀ ပြည့်ပွဲအပြီး ၀ အား စစ်အစိုးရ ထိုးစစ်ဆင်ဖွယ်ရှိ 21/9/09
“အကြောင်းရင်း ၃ ရပ်တွေ့ရတယ်။ (၁) နအဖ သျှမ်းပြည် တပ်မတော်ကို ထိုင်းအစိုးရ ကနေတဆင့် ဆွေးနွေးခိုင်းတယ်။ (၂) သံလွင် အရှေ့ခြမ်း မော်ဖှဒေသမှာ လမ်းတွေပြုပြင်တိုးချဲ့တယ်။ လက်နက်ကြီးတွေ သံချပ်ကာကားတွေနဲ့အတူ တပ်အင် အားတချို့ ထပ်ဖြည့်နေတယ်။ (၃) တရုပ်ပြည် ထူထောင်ခြင်း နှစ် ၆၀ ပြည့်ပွဲ ပြီးမြောက်တဲ့အချိန်နဲ့ အပစ်ရပ် တွေအသွင် ပြောင်းဖို့ သတ်မှတ်ချိန် အတူတူဘဲဖြစ်နေတယ်။” အပြည့် အစုံသို့ 
- နှိုင်ငံမဲ့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသား ကလေးငယ် ဂျပန် စက္ကူလေယာဉ်လွတ် ပြိုင်ပွဲမှာ တတိယဆု ရရှိ 21/9/09
တနင်္ဂနွေနေ့က ဂျပန်နိုင်ငံ မာကူဟာရီ ကွန်ပလက်ဇ် ချီဘား ခရိုင်တွင် ကျင်းပသော အိုမီဂါရီ စက္ကူလေယာဉ် ပြိုင်ပွဲတွင် တိုင်းပြည်မဲ့သူ မြန်မာ နိုင်ငံသား မောင်သောင်းဒီ ( အသက် - ၁၂နှစ် ) သည် ထိုင်းနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု၍..အပြည့် အစုံသို့ 
- မြန်မာ့အရေး ဘာတွေတွေးလို့ ဘာတွေလုပ်ကြမလဲ 20/9/09
ကမ္ဘာတလွှား ကျင့်သုံးနေကြသော နိုင်ငံတကာဥပဒေများ၊ သဘော တူညီချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ မြန်မာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တို့၏ လုပ်ရပ်များကို ကနဦးအဆင့်၌ ဟန့်တားခြင်း၊ လမ်းညွှန်ခြင်းနှင့် ပျက်ကွက်ပါက နောက် တဆင့်တွင် သူတို့အား အရေးယူ အပြစ်ပေးခြင်း
ကုလသမဂ္ဂ၏ လုံခြုံရေး ကောင်စီမှာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အပြင်းထန်ဆုံး အာဏာ သက်ရောက်နိုင်စွမ်း ရှိသဖြင့် မြန်မာ့ အရေးအား တိုက်ရိုက် ကိုင်တွယ်ခြင်း
နိုင်ငံတကာအတိုင်းအတာဖြင့် မေတ္တာရပ်ခံခြင်း၊ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်း၍ ဖြေရှင်းခြင်း (Constructive Engagement)၊ ကန့်ကွက်ခြင်း၊ သတိပေးခြင်း၊ ပြစ်တင် ရှုတ်ချခြင်း၊ စီးပွားပြစ်ဒဏ်ခတ် အရေးယူခြင်း (Economic Sanctions)
နိုင်ငံရေးနည်းလမ်း မဟုတ်သော စစ်ရေးနည်းလမ်းကို အသုံးချလျှင် ဖြစ်နိုင်စရာ ပြည်ပနည်းလမ်းများမှာ
* ၁၊ ကုလသမဂ္ဂ၏ နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်းရေး တပ်ဖွဲ့များ ချထား၍ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပေးခြင်း၊
* နိုင်ငံတခုခုမှ စစ်ရေးအရ ဝင်ရောက်တားဆီးခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
- နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့အမြင် ( သားဆွေ )
Exile ဘ၀ နဲ့ မြန်မာ့အလှ
တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတွေ ယုံကြည်သူ၊
ပြည်သူလူထု ချစ်ခင် လေးစားသူ။
နိုင်ငံတကာ လေးစား တန်ဖိုးထား သူတယောက် ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ ရှိနေပါလျက်နဲ့ ဖယ်ထုတ် ထားတာ တိုင်းပြည် နစ်နာ ပါတယ်။
ပြည်သူတွေ တက်ညီ လက်ညီ ကြွေးကြော် ကြပါ။ဒေါ်စုကို လွှတ်ပေးပါ။ နိုင်ငံ့အရေးမှာ ပါဝင်ခွင့်ပေးပါ။
-ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ အစည်းအဝေး ကျင်းပမည် 17/9/09
“စီအာပီပီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့တာက အဓိကအားဖြင့် စစ်အစိုးရက အကောင်အထည် ဖော်မပေးခဲ့တဲ့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို အတည်ပြုပြီး လွှတ်တော် ခေါ်နိုင်ရေးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ အန်အယ်လ်ဒီပါတီနဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေ ပူးပေါင်းပြီး ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ စစ်အစိုးရရဲ့ ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့် လွှတ်တော်ခေါ်ယူရေး အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ဝေးသထက်ဝေးလာတာပေါ့။ သို့သော် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်နဲ့ လွှတ်တော်ခေါ်ယူရေးကိုတော့ စီအာပီပီအဖွဲ့ဝင် ပါတီတွေက ဒီနေ့ထက်ထိ ကိုင်စွဲ ထားဆဲပါပဲ” အပြည့် အစုံသို့ 
- အကျဉ်းသား ၇၁၁၄ ဦး လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးမည် 17/9/09
''ယင်းတို့၏ မိသားစုများအား ငဲ့ညှာသော အနေဖြင့် လည်းကောင်း၊ ယင်းတို့သည် နိုင်ငံတော်၏ မေတ္တာနှင့် စေတနာကို နားလည်ကြပြီး မိမိအကျိုး၊ ဒေသအကျိုးနှင့် နိုင်ငံတော်အကျိုးကို ထမ်းရွက်သွားနိုင်ကြစေရန် အတွက်လည်းကောင်း ၂၀၀၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံသား အကျဉ်းသား/အကျဉ်းသူ ၇၁၁၄ ဦးတို့အား ယင်းတို့၏ ကျခံရန် ကျန်ရှိသော ပြစ်ဒဏ်အစိတ်အပိုင်းကို လွတ်ငြိမ်းသက်သာခွင့် ပြုလိုက်သည်''အပြည့် အစုံသို့ 
- မြန်မာနိုင်ငံမှ အမေ့ခံ အကျဉ်းသားများ အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန် 17/9/09အပြည့် အစုံသို့ 
- ဒီလထဲ ---- ကောက်ကြောင်းဖော်တဲ့ စာအုပ်များနဲ့ အသံ ကောက်နုတ်ချက် 17/9/09
1/ကြပ်ပြေးနန်းတွင်းအရှုပ်တော်ပုံ အမှတ် ၁ - ၂၆
2/ဘ၀တပါး - နတ်လူ ရိသည်
3/၂၀၁၀ အကြို ဘောလုံးပွဲမြင်ကွင်းထုတ်လွှင့်ချက်
- ၁၉၇၄ ခုနှစ် အခြေနေမျိုး ပြန်ဖြစ်မယ့်အရေး လူထုဦးစိန်ဝင်း စိုးရိမ် 16/9/09
"အခြေခံ ဥပဒေဟာ အတည်ပြုပြီးရင် လွတ်တော်မှာ ပြင်ဆင်ဖို့ခက်ခဲတာကြောင့် ...."အပြည့် အစုံသို့ 
- မြန်မာနိုင်ငံ အသွင် ကူးပြောင်းရေး ပညာရှင်နဲ့ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူတွေ ချက်နိုင်ငံမှာ ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ16/9/09
- လှုပ်ရှားမှုတွင် ပြည်သူများ ပါဝင်ရန် ကျောင်းသားအဖွဲ့များ တိုက်တွန်း 16/9/09
"အခုလက်ရှိ အကျဉ်းထောင်မှာ ဒုက္ခအမျိုးမျိုး ခံနေရတဲ့ သံဃာတော်တွေရဲ့မပြည့်ဝသေးတဲ့ ဆန္ဒကို ပြည်သူတွေနေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ နိုင်ငံရေးကောင်းကျိုးဟာ ပြည်သူလူထုတွေမှာလည်း တာဝန်ရှိတယ်"အပြည့် အစုံသို့ 
- ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇနကံဆောင်ပွဲ အထမြောက်စေရမည်ဟု သံဃာ့အဖွဲ့ချုပ်မှ မိန့်ကြား 16/09/09
“စစ်အစိုးရရဲ့ ထင်ရာလုပ်နေတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ဦးဇင်းတို့ သံဃာအဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ) က ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ပြီး၊ သံဃာတော်တွေကို ဆက်လက်စော်ကားပြီး သံဃာတော်တွေ တောင်းဆိုထားတဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေကို မလိုက်လျောရင် စစ်အစိုးရအနေနဲ့ ကြီးစွာသော ဆုံးရှုံးမှုကြီးနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့ အသိပေးချင်ပါတယ်” လာမည့်သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့မှစကာအပြည့် အစုံသို့ 
-ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းများ၏ သမီးများ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် ပါတီထောင် 15/09/09
“ကျနော်တို့နဲ့ လက်ရှိ စစ်အစိုးရနဲ့က ဘာမှ အဆက်အသွယ် မရှိပါဘူးဗျ။ ရင်းနှီးမှုလည်း မရှိဘူးဆိုတော့ ဒီ power sharing ကိစ္စက ဘယ်လို ဆွေးနွေးမှာလဲနော်။ ဘာမှ ဆွေးနွေးစရာလည်း မရှိဘူး။ ကျနော်တို့က သီးခြား လွတ်လပ်တဲ့ ပါတီ အနေနဲ့ ထောင်တာပါ။ ထောက်ပံ့တာမျိုးလည်း မရှိပါဘူး” ဦးသုဝေ အပြည့် အစုံသို့ 
-“တိုက်ခိုက်မှုရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ဘာရှိသလဲဆိုတာက ရှင်းနေတာပဲ”15/09/09
"တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတွေရဲ့ အနာဂတ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောရရင် ဒါဟာ တော်တော်ကို ရှုပ်ထွေးတဲ့ကိစ္စပဲ။ မြန်မာပြည်မှာ လူထုက ရွေးကောက်တင်မြှောက်တဲ့၊ လူထုကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အစိုးရတရပ် မရှိဘူး ဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတွေရဲ့ အနာဂတ်ကတော့ ကောင်းမှာ မဟုတ်ဘူး။" အပြည့် အစုံသို့ 
-Myanmar -aheadache for ASEAN 14/09/09more
-၇၄ အခြေခံ ဥပဒေ မရှိကြောင်း လျှောက်လဲမည် 12/09/09အပြည့် အစုံသို့ 
-Win Tin Released after Questioning 12/09/09more
Win Tin,asenior member of Burma's main opposition party, the National League for Democracy (NLD),Eighty-year-old Win Tin spent 19 years in Rangoon's notorious Insein prison until his release last year.
-‘ရှစ်လေးလုံး အလွန်ကျောင်းသားတိုက်ပွဲများ’ 12/09/09အပြည့် အစုံသို့ 
-Behind Burma’s closed doors 12/09/09more
-လျှို့ဝှက်လိုဏ်ခေါင်းတခု ထပ်ပြီးဖောက်လုပ်နေ 11/09/09အပြည့် အစုံသို့့
-အကျဉ်းကျ ရှမ်းခေါင်းဆောင် ဦးခွန်ထွန်ဦး၏ (၆၆) နှစ်မြောက် မွေးနေ့ကျင်းပ 11/09/09အပြည့် အစုံသို
-စက်တင်ဘာ ၁၁၊ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှု ၈ နှစ်ပြည့် 11/09/09
“ဒီ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ ကျုးကျော် တိုက်ခိုက်မှုကို ကျုးလွန်ခဲ့တဲ့ သူတွေကို ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ဖို့ ကျနော်တို့ သံန္နိဋ္ဌာန် တွေ အသစ်တဖန် ပြန်ပြီး ချမှတ်ကြရပါလိမ့်မယ်။ ဒီ တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်ဖို့ ကျနော်တို့ ဘယ်တော့မှ တွေဝေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အယ်လ်ခိုက်ဒါးနဲ့ အစွန်းရောက်တွေကို တိုက်ဖျက်ဖို့ ကျနော်တို့ ဘယ်တော့မှ အလျှော့ပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။” လို့
လွန်ခဲ့တဲ့ ရှစ်နှစ်က စစ်ဌာနချုပ် အဆောက်အအုံကို ပြန်ပေးဆွဲခံရတဲ့ ဂျက်လေယာဉ်ကြီးနဲ့ ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ နေရာနဲ့ မနီးမဝေးမှာ သမ္မတအိုဘားမား မိန့်ခွန်းပြောအပြည့် အစုံသို့ 
-ဓာတ်ငွေ့ ရောင်းရငွေ ဒေါ်လာသန်း ငါးထောင်နီးပါး မြန်မာဗိုလ်ချုပ်များ ခိုးဖွက်ထား 10/09/09အပြည့် အစုံသို့ 
-ရွေးကောက်ပွဲအပြီး မြန်မာနယ်နိမိတ်ရှိ မဲခေါင်ဒေသအား ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ပေးမည့်အပြည့် အစုံသို့ 
-ဗမာပြည်သူတွေ အတွက် နောက်ရွေးကောက်ပွဲတခု မလိုအပ်တော့ ဦးဝင်းတင်ကဆို
“ ကျမတို့က လူတွေကို အကြောက်တရားတွေ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြစိတ်တွေ အခြေခံပြီးတော့ ဆက်ဆံမှာ မဟုတ်ဘူး။ မည်သူနဲ့ မဆို တွေ့ဆုံဆက်သွယ်မှာ ဖြစ်တယ်။ တရုတ်၊ အမေရိကန်၊ အိန္ဒိယ စသည်တို့အားလုံးနဲ့ ရင်းနှီးစွာ သာတူညီမျှ ဆက်ဆံကြမှာ ဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်အိမ်နီးချင်းကို ရွေးချယ်ခွင့် မရှိတဲ့အတွက် တရုတ်ပြည်နဲ့လည်း ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေး လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို နားလည်ပါတယ် ..” ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပြည့် အစုံသို့ 
စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်။
-ပြည်တွင်း၌ ဆရာတော် ဦးဥတ္တမနေ့ အခမ်းအနားများပြုလုပ်အပြည့် အစုံသို
-စစ်ပွဲသစ်များ မကြာမီ ဖြစ်ပွားလာနိုင်ဟု အကဲခတ်များ ပြောဆိုအပြည့် အစုံသို
-ပါတီ နှစ်ခု ဆိုင်းဘုတ် တင်ခွင့်ရအပြည့် အစုံသို
"မိမိကိုယ်မိမိ ကယ်တင်ရှင်လို့ အနှစ် (၅၀) နီးပါး ၀ါဒဖြန့်လာတဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင် တွေဟာ သူတို့ဝါဒ ဖြန့်တာကို သူတို့ကိုယ်တိုင် ပြန်ယုံနေတဲ့အတွက်နေရာတကာ စစ်ဗိုလ်က ဦးဆောင်ခွင့်ရှိကြောင်း ဥပဒေပြုတာဖြစ်တယ်"အပြည့် အစုံသို့ 
-စစ်အစိုးရတပ် လှုပ်ရှားမှုများကြောင့် သျှမ်းပြည်လူထု ထိပ်လန့်ချောက်ချားအပြည့် အစုံသို့ 
-ဂုဏ် နှင့် တန်ဘိုးကင်းသော လူများအကြောင်း အပြည့် အစုံသို့ 
-“အနီးကပ် ဆက်ဆံမှု” ဝါဒကို အပြုသဘောအရ ဝေဖန်ခြင်း အပြည့် အစုံသို
-ဓမ္မနဲ့ အဓမ္မ တိုက်ပွဲအပြည့် အစုံသို့ 
- NLD ပါတီတွင်းစည်းရုံးရေး ပြန်လည်တည်ဆောက်နေ အပြည့် အစုံသို့ 
-ဖောက်ခွဲယမ်းစက်ရုံ အကြောင်းပြချက်တခုသာ အပြည့် အစုံသို့ 
-ဖုန်ကြားရှင်း ပြန်အပ်ဖို့ တောင်းဆိုချက် ၀ တပ်ဖွဲ့ အကြောင်းမပြန် အပြည့် အစုံသို့ 
-မြန်မာနိုင်ငံ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု ထုတ်ပြန်မှု အပြည့် အစုံသို့ 
-ဂီတသမား မိဖုရား၊ အနောက်နန်းမတော် မမြကလေးအပြည့် အစုံသို့ 
-တိုက်ပွဲများဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း KNU ပြောဆို အပြည့် အစုံသို့ 
-Civil War Knocking At Burma’s Doors more
-တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်မှ လက်နက်များဖြင့် ပါလက်စတိုင်း စစ်သွေးကြွများအား ပံ့ပိုး အပြည့် အစုံသို
posted by asoonyouk (အစွန်းရောက်) @ 23:070Comments Links to this post